Duufaannada Hawada, cadaawayaasha aamusan ee Dunida | Saadaasha Shabakadda
Sannad kasta, labadaba Baasifigga iyo duufaannada Atlantic (ama duufaannada, haddii aan ku sugan nahay Aasiya) foomka wuxuu noqon karaa mid xoog yar, si loo helo xoogga lagama maarmaanka u ah baabi'inta wax kasta oo jidkooda ku jira. Laakiin, Maxaa dhici lahaa haddii duufaano cirka ah oo dhulka ku dhaca?
Tani, in kasta oo ay noqon karto (oo aynaan diidi doonin, waa inay ahaataa) si fudud oo qarow ah, wax aan dhab ahayn, nasiib darro daraasad ayaa si kale leh. Uma badna, haa, laakiin waxay u badan tahay dhammaantood.
1 Waa maxay duufaanada hawada sare?
2 Sidey saameyn ugu yeelan lahaayeen dhulka?
Waa maxay duufaanada hawada sare?
Si loo fahmo sida ay u samaysan yihiin, waa inaan ka hadalnaa Qorraxda ama, si gaar ah, dabaysha qorraxda. Dabaysha noocan ahi waxay keenaysaa koritaanka Kelvin-Helmholtz xasillooni darro. Sidoo kale loo yaqaan mowjadaha Kelvin ama hirarka Kelvin-Helmholtz cirrus, waxay dhacdaa marka qulqulaya ay ku dhacdo dareeraha joogtada ah ama marka uu jiro kala duwanaansho xawaare oo ku saabsan isdhexgalka u dhexeeya labada dheecaan.
In kasta oo ay u jiraan in ka badan 500 kun oo kiilomitir, Katariina Nykyri, oo ah cilmi-baare ka tirsan Xarunta Cilmi-baarista Cirka iyo Hawada ee Florida, ayaa tilmaamtay waxay soo saari kartaa isbedbedello fara badan oo isdaba joog ah oo ku dhaca xarriiqyada birlabta birlabta iyo la falgallada walxaha ku jira suunka shucaaca.
Sidey saameyn ugu yeelan lahaayeen dhulka?
Duufaannada hawada sare waa khatar dhab ah dayax gacmeedyada iyo ergooyinka hawada sare. Iyagu waa »mid ka mid ah siyaabaha ugu waaweyn ee ay dabaysha qoraxda u qaaddo tamarta, cufnaanta iyo xawaaraha ay ugu jirto magnetosphere; Sababtaas awgeed, waxay saameeyaan sida dhakhsaha badan ee hirarka Kelvin-Helmholtz u koraan iyo baaxaddooda.
Xasilooni darrada ay sababtay plasma waxay ka soo kici doontaa aagga magnetka ee dhulka, iyadoo awood u leh Abuur guutooyin tamarta kuleylka ah qiyaastii 67 kun oo kilomitir meeraha. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo qaababka saameeya koritaanka iyo sifooyinka ifafaalahan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Duufaannada » Duufaannada hawada sare, cadowga aamusan ee Dunida